LỌ NSỌ N'BYLỌ AKW BYKWỌ AKW BYKWỌ AKW INKWỌ maka Vanuatu | 100% Onu ogugu mmeri | IJE OZI | PASSPORT nke abụọ maka Vanuatu, Immigrashọn nke akụ na ụba site na itinye ego na Vanuatu, ụmụ amaala site na itinye ego Vanuatu, ụmụ amaala site na mmemme itinye ego Vanuatu, nwa amaala site na i
Ensbụ obodo site na itinye ego maka Vanuatu na Golden Visa
Anyị na-enye ndị ọrụ mbata na ọpụpụ na Vanuatu maka:
● Obibi site na itinye ego na Vanuatu
Nwa amaala site na itinye ego na Vanuatu
Visa Visa ọlaedo na Vanuatu
Passport Paspọtụ nke abụọ sitere na Vanuatu
● Nwa amaala site na itinye ego maka Vanuatu site na itinye ego na ụlọ
Best Ndị ọrụ maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu na ndị ọka iwu maka Amaala site na itinye ego na Vanuatu na ndị na-ere ahịa maka ụlọ ihe omume ụmụ amaala na Vanuatu na-arụ ọrụ maka nchekwa ndị ahịa.
Ibu nwa amaala site na ndị ọrụ itinye ego maka Vanuatu na-enye ọrụ obibi site na itinye ego na Vanuatu, atumụ amaala site na mmemme itinye ego na Vanuatu, Citizmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu, nke abụọ site na itinye ego na Vanuatu, ụmụ amaala abụọ site na itinye ego na Vanuatu, ụmụ amaala abụọ site na itinye ego na Vanuatu, ụmụ amaala na obibi site na itinye ego na Vanuatu , Nwa amaala na-adịgide adịgide site na itinye ego na Vanuatu, nwa amaala site na itinye ego na Vanuatu, Citizmụ amaala site na atụmatụ itinye ego na Vanuatu, ensmụ amaala site na atụmatụ itinye ego na Vanuatu, idencynọ na ya site na itinye ego na Vanuatu, idencynọ na ya site na itinye ego na Vanuatu, Nbipụta site na mmemme itinye ego na Vanuatu, Nbipụta site na mmemme itinye ego na Vanuatu, nke abụọ Obibi site na itinye ego na Vanuatu, obibi abụọ site na itinye ego na Vanuatu, obibi na ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu, ibi na ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu, mmemme obibi obibi na Vanuatu, Nbido site na atụmatụ itinye ego na Vanuatu, Nbido site na atụmatụ itinye ego na Vanuatu, nke abụọ paspọtụ na Vanuatu, pas nke abụọ mmemme egwuregwu na Vanuatu, usoro paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, nnabata na paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, paspọtụ nke abụọ site na itinye ego na Vanuatu, paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, atụmatụ paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, nke abụọ atụmatụ paspọtụ na Vanuatu, visa ọlaedo na Vanuatu, visa ọlaedo na Vanuatu, mmemme visa ọla edo na Vanuatu, mmemme visa ọlaedo na Vanuatu, visa ọlaedo nke abụọ na Vanuatu, nke visa ọla edo nke abụọ na Vanuatu, nke visa nke ọla edo nke abụọ na Vanuatu, visa ọla edo nke abụọ na Vanuatu, ụmụ amaala na visa ọlaedo na Vanuatu, obibi na visa ọlaedo na Vanuatu, amaala ọla edo na Vanuatu, atụmatụ visa ọlaedo na Vanuatu, atụmatụ visa ọla edo na Vanuatu.
“1 kwụsịtụ azịza” maka ụmụ amaala gị niile site na itinye ego na Vanuatu tinyere nkwado ndị ọzọ.
Obere ego na Vanuatu maka ụmụ amaala site na itinye ego: USD 150,000
Okwu mmeghe Vanuatu na nwa amaala site na itinye ego
Mụtakwuo maka Vanuatu
Vanuatu gụnyere agwaetiti anọ dị mkpa na agwaetiti 80 ndị ọzọ pere mpe, ihe dị ka 60 n'ime ha nwere. Ọrụ VSA n'ozuzu afọ abụọ kachasị nso, yabụ ịkwadebe asụsụ agbata obi dị mkpa. Anyị na-enye nkwadebe asụsụ dị mkpa (Bislama) maka mmalite nke ọrụ na nzute ndị na-esote ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'oge ọrụ ahụ. Ghọta ọdịnala ndị dị nso dị mkpa maka ọrụ na-arụpụta ihe, mana mara na ndị a nwere ike ịgbanwe malite na otu agwaetiti wee banye na nke ọzọ. Isiokwu anaghị abịarukarị nso n'ụzọ kwụ ọtọ. Kparịta ụka ezinụlọ na ihe ndị dị nso na-adịkarị mkpa tupu ị gbadata inyocha ihe gị dịka onye ọrụ afọ ofufo nwere ike ịdị.
Vanuatu bụ ụdị agwaetiti paradaịs gị nke dị na mbara igwe nke ndị ezumike na-agaghị agabiga, na site na ugbu a Vanuatu - mkpali 10 na-akpali akpali ịga leta. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụgbọ mmiri njem na-akwụsị obere oge n'otu akụkụ nke agwaetiti ahụ, n'ezie agwaetiti ndị mebere Vanuatu anọghị na radar ndị mmadụ dịka Fiji na New Caledonia dị. Nke a bụ ikekwe akụ kachasị mma jikọtara ya na onye kacha nwee mmekọrịta udo na oke ugwu nke agwaetiti; ọ dị anyị ka Vanuatu kụrụ ya na bọlbụ. Vanuatu dị na Oke Osimiri Pasifik ma ọ bụghị ogologo ụzọ site na Australia na New Zealand. New Caledonia na-etinye 230km n'akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ, ebe Fiji dị 800km n'ebe ọwụwa anyanwụ. Enwere ihe karịrị agwaetiti 80 na ọ nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na 200. Mee mkparịta ụka iji soro ndị isi ụlọ ọrụ njem Vanuatu nwee mkparịta ụka banyere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na ime na Vanuatu.
Nkwenye na-akpali akpali ileta Vanuatu
1. Ndị mmadụ n’otu n’otu
Ndị Vanuatu dị ezigbo mma. Ha na-ewe oge elekere nke ụbọchị iji gaa nleta na ikwu okwu n'etiti onwe ha na ngalaba azụmaahịa dị na Port Vila. Ọ bụ ezie na Port Vila bụ isi obodo, ọ na-egosi n'ezie dị ka obere obere obodo mara mma ma dị na ọdụ ụgbọ mmiri. Agwaetiti Malekula na-enye nghọta dị ukwuu banyere ụzọ ndụ na mgbakọ nke Vanuatu
2. Pldara na igwu mmiri
Awaynọpụ site na agwaetiti niile na-eme ka ịwụda na snorkeling ihe osise maka ụfọdụ ndị mmadụ. Gordon nwetara ikikere PADI ya ebe ahụ ma nwee nhọrọ iji nyochaa mmiri. N'otu aka ahu enwere otutu ihe ojoo ichoputara n'ime mmiri a di egwu ma nwekwa oke ndu nke ndu mmiri. Maka ndị na-egwu mmiri, ọ bụ ọhụụ doro anya na ọnọdụ dị ọcha. Irughari bu ihe ozo ichoro ma mu nwawa nnoo ime ugboala. Read na-agụ maka ime ka ndaba Vanuatu ebe a. Chọpụta ebe ị ga-aga ịbanye na Vanuatu.
3. Gaa Bungee hopping ebe ọ malitere
A maara Pentikọst Island maka mmalite nke nsị Bungy, na-amalite n'oge oge ochie a na-akpọ naghol, ma ọ bụ nsị ala. AJ Hackett wuru bungee ihu ala site na omenala ochie nke ịwụ elu ala na Pentikọst Island. N'etiti Eprel na June mgbe niile, na Satọde, ụmụ nwoke nọ n'akụkụ ndịda nke agwaetiti ahụ na-agbapụta site na elu ogologo (ihe dị ka 20 ruo 30 m) nwere osisi ndị dị na ụkwụ ha. N'agbanyeghị na ọ ga-adịtụ njọ ị ga-aga, ọ na-eme na ihe omume na ịchọrọ ilele omenala a na-atọ ụtọ.
4. Ghọta ọrụ ọdịbendị
Ọ bara uru ịhụ akụkụ nke omenala na mmemme mmekọrịta nke ndị nna ochie Vanuatu. Firewalking bụ ihe ịtụnanya n'ezie. Nke a bụ ebe ị ga - enweta ụfọdụ azịza gbasara otu ndị obodo si achụ, azụ, ojiji osisi maka otu ha si echekwa nri.
5. Nyochaa Mmiri mmiri nke Vanuatu
- Mele Cascades. Na agwaetiti nke Efate, ị ga-achọpụta ọdịda ndị a. Anya ahụ na-awụ akpata oyi n'ahụ, mmiri na-agbanyeghachi, na ahụmịhe dị ịtụnanya.
Nke a bụ isi ihe na nzukọ nke na-esite na Mele Cascades na-ekwu, "Na ohere ịhapụ na ị naghị eme oriri ụbọchị na ụbọchị, n'oge ahụ ị naghị ebi". A na-akpọ ha Edge Adventure ọchị ma nwee ọrụ dị egwu maka ịdada ọdịda ndị a. Adịghị akwado na mgbakwasị na anaghị m eme statures.
Lodging na ụbọchị kwa ụbọchị
Anyị na-ekwe nkwa na ndị ọrụ afọ ofufo nyere ntọala dị mma na ụlọ ọrụ gas maka isi nri. Na Port Vila na Santo, ị ga-enwe ike ịbịaru ike elekere 24, ekwentị, mmiri obodo na-agbanwe agbanwe, weebụ, ebe a na-eri nri, ụgbọ ala ọha na eze, ezigbo ụlọ ahịa, yana ọtụtụ netwọ ndị a dọọrọ n'agha. Na ohere ị na-adabere na ebe ọzọ, ị nwere ike ịnweghị nke ọ bụla n'ime ndị a. A na-emeso mmiri obodo ahụ n'ụzọ na-agbanwe agbanwe na Vila na Santo ma na-echekwa ka ha drinkụọ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na mmiri dị elu na calcium, n'ihi ya, ọ dị mma ịfụfụ tupu ị drinkingụọ.
Vanuatu bụ ebe dị nwayọọ na ụfọdụ uwe ndị ọdịda anyanwụ ekwesighi. Maka ụmụ nwoke, họta jeans ogologo, ogologo ikpere, na uwe elu. Maka ụmụ nwanyị, uwe, uwe mwụda, na uwe elu na-eyi mgbe niile - uwe elu na-enweghị aka kwesịrị ekwesị. Gbalịa ka ị ghara ikpughe akpụkpọ anụ na ikpere, agbanyeghị, ọkachasị mgbe ị na-aga oge ndị ọzọ. Iesmụ nwanyị kwesịrị iyi uwe dị mkpụmkpụ ma ọ bụ akwa mkpuchi na uwe elu mgbe ha na-egwu mmiri n'ókèala ndị na-abụghị ezumike.
Ọrịa Jungle jupụtara na mpaghara ka ukwuu nke Vanuatu na mpụga Port Vila na ndị ọrụ afọ ofufo niile ga-eji prophylaxis malaria. A na-atụ aro nchebe dị iche iche ka atụ, dịka ọmụmaatụ, ihe na-asọ oyi nke na-asọ oyi na ogologo aka / ogologo ọkpa n'abalị ma ọ bụrụ na mpụga na ụgbụ anwụnta na-apụ na ị ga-anọrọ na mpaghara oke ọkụ.
Banking na ego
Enwere ụlọ akụ ole na ole na Vanuatu n'agbanyeghị na nhọrọ ole na ole dị na mpụga Port Vila. Anyị na-emepe akwụkwọ mpaghara maka ndị ọrụ afọ ofufo ọ bụla ozugbo ị gosipụtara na Vanuatu ma na-akwụghachi ego na-akwụ ụgwọ na ọnwa ruo ọnwa na nke a. Enwere ike ịnweta kaadị maka ndị ọrụ afọ ofufo nwere akaụntụ ANZ ma ọ bụ Westpac na Port Vila ma ọ bụ Luganville. Ego dị nso bụ Vatu. Gaa Leta XE.com maka ọnụego azụmaahịa ugbu a.
Basic nkọwa maka ụmụ amaala site Investment for Vanuatu
Opekempe ego maka Ensbụ ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu
Agbakwunye ụgwọ maka visa ọlaedo maka Vanuatu
Ensbụ ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu
Akwụkwọ ikike onye nwe ala
Oge nhazi maka ụmụ amaala site na itinye ego nke Vanuatu
Enwere ike inweta site na itinye ego nke $ 100,000.
Site na itinye ego nke $ 150,000 ị nwere ike ịnweta ikike ịbụ nwa amaala site na iji atụmatụ VCP na DSP.
E nyeere ụmụ amaala Vanuatu ikike ịbụ onye amaala abụọ
Nhọrọ ntinye ego maka Ensbụ nwa amaala site na itinye ego nke Vanuatu
Azụmaahịa, Ahịa ụlọ
Ihe kpatara ị ga-eji gaa Vanuatu maka ịbụ nwa amaala
Republic nke Vanuatu nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agwaetiti iri asatọ n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Ọstrelia. Ọ bụghị naanị paradaịs na-ekpo ọkụ kamakwa ọ bụ onye so na British Commonwealth. N'ụzọ dị otú a, paspọtụ nke Vanuatu na-enye gị nnabata na Great Britain, ụfọdụ ndị Europe, na ọtụtụ mba ndị Eshia. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ paspọtụ nke abụọ, Vanuatu bụ ebe kachasị mma n’ihi sistemụ ego ya kwụsiri ike, ọnọdụ obibi ụtụ ụtụ mara mma yana akụrụngwa nkwukọrịta ọma.
Mbata na ezinụlọ na Vanuatu
Di ma ọ bụ nwunye gị, ụmụaka ndị na-erubere ya isi nke na-erughị afọ 25, 25 na nne ma ọ bụ nna gị karịa 65 afọ nwere ike itinye akwụkwọ na gị yana yabụ ezinụlọ niile nwere ike ịnụ ụtọ uru nke ịbụ nwa amaala nke Vanuatu.
Ensbụ nwaamaala Site na mmemme itinye ego na Vanuatu insite
Na-amalite akwụkwọ gị site na izigara onye ọrụ gị otu akwụkwọ paspọtụ gị dị ugbu a, nke dị na ya yana ndekọ mpụ ọ bụla. Mgbe nhichapụ nke ndabere gị, a na-agbakọ ụgwọ ihe omume maka ndị niile na-achọ ya. Mgbe ngụkọta oge ị bịanyere aka n'akwụkwọ akwụkwọ nke ụmụ amaala.
Have ga-etinye nkwụnye ego nke 30 pasent nke ngụkọta ego tupu oge eruo. A naghị akwụghachi gị. Mgbe ịkwụ ụgwọ ọ na-ewe ụbọchị 30-60 iji hazie ngwa ahụ.
Na-akwụ ụgwọ ego 70 fọdụrụnụ nke ego ahụ ka ị nwesịrị ngwa gị, nke ị nwetara ụmụ amaala na paspọtụ nke Vanuatu. Ga-eme njem gaa obodo ahụ ka ị oathụọ iyi Nkwenye.
Paspọtụ gị nke Vanuatu ga-adị irè maka afọ ise. Enwere ike imeghari ya n’enweghi ego ozo.
Nchịkọta ego maka Vanuatu
Ga-enwerịrị ike ịbụ nwa amaala nke Vanuatu site na otu onyinye USD 130,000 na Mmemme Nkwado Development Vanuatu. Ọ bụrụ n'itinye naanị gị, ọ bụ ụgwọ achọrọ otu oge, nke kpuchiri usoro ahụ niile ma nye gị ndụ amaala niile.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkpọtara ndị ezinaụlọ gị, a ga-akwụnye ụgwọ ọzọ.
> Ezinụlọ nke 4: di ma ọ bụ nwunye gị na ụmụ gị - 35,000 USD
> Maka ụmụaka ọ bụla - USD 20,000
> Maka nwatakịrị ọ bụla dabere na nwata toro n'okpuru 18 na karịa 25 afọ - USD 30,000
> Maka nne ma ọ bụ nna ọzọ dabere na 65 afọ - USD 30,000
Mba ahụ na-enye ọnọdụ obibi ụtụ isi zuru oke: enweghị ụtụ isi ego, ụtụ ala ma ọ bụ ụtụ uru.
Nkwado ndị ahịa maka ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu
Ndi otu anyi ụmụ amaala site n'aka ndị na-etinye ego maka Vanuatu na ụmụ amaala by Onyeka Onwenu Lawyers nke Vanuatu na-enye ndị ahịa na ezinụlọ ha na Vanuatu nkwado maka ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Vanuatu, obibi site na itinye ego na Vanuatu na ohere mbata ndị ọzọ, na mba 37.
Ọrụ anyị ejedebeghị na obibi site na itinye ego na Vanuatu ma ọ bụ Golden Visa sitere na Vanuatu ma ọ bụ ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu ma ọ bụ paspọtụ nke abụọ, anyị na-enyekwa aka na ohere itinye ezigbo ụlọ na Vanuatu, na-enye azịza zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọlite ​​ụlọ ọrụ na Vanuatu ma ọ bụ nke dị n’akụkụ mmiri, akụ na ụba mmadụ na Vanuatu na ọtụtụ ndị ọzọ, nke gụnyere atụmatụ ego na ọtụtụ ndị ọzọ.
Inyere ndi ahia anyi aka inweta ihe nlere nke ndi amaala n’ime ya na site na Vanuatu na ebe obibi nke abuo.
Nkwado pụrụ iche maka ụmụ amaala nke Vanuatu:
Anyị na-enye ọnụ Ensbụ ụmụ amaala site na ọrụ itinye ego maka Vanuatu, site na ọnụ anyị ntinye ego na ụlọ ọrụ iwu mbata na ọpụpụ maka Vanuatu, ndị ọka iwu mbata na ọchụnta ego maka Vanuatu, nwa amaala dị ọnụ site na ndị na-ahụ maka itinye ego na Vanuatu, ụmụ amaala na-akwụ ụgwọ maka Vanuatu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbata na ọpụpụ maka Vanuatu.
Ensbụ nwa amaala site na itinye ego site na Vanuatu ruo Mba 37.
Visa ọlaedo na Vanuatu ruo 37 Mba.
Paspọtụ nke abụọ site na Vanuatu ruo Mba 37.
Azụmaahịa sitere na Vanuatu gaa Mba 106.
Bụ ụmụ amaala site na mmemme itinye ego na Vanuatu.
Mmemme visa ọlaedo na Vanuatu ruo 37 Mba.
Ensbụ nwaamaala site na mmemme itinye ego site na Vanuatu ruo Mba 37.
Mmemme paspọtụ nke abụọ site na Vanuatu ruo Mba 37.
Mmemme mbata na azụmaahịa site na Vanuatu ruo mba 106.
Ensbụ amaala site na itinye ego nke Vanuatu site na Reallọ ala
Anyị na-enye nkwado maka itinye ego na ụlọ na Vanuatu na onye ahịa kwesịrị ị nweta ezigbo nloghachi na ego na Vanuatu, oge ọ bụla, ha chọrọ ịpụ na ntinye ego ha mere maka ụmụ amaala ha site na itinye ego maka Vanuatu. Anyị na ndị na-emepe emepe ụlọ kacha mma na Vanuatu nwere ezigbo ndekọ na akụ ha dị mma na Vanuatu, na-eweta ezigbo ego.
Mmemme obibi kacha mma maka Vanuatu na itinye ego na ezigbo ala na Vanuatu.
Mkpa ịmata - knowbụ amaala Vanuatu site na itinye ego
Ensbụ onye amaala site na onye ọka iwu itinye ego na Vanuatu ga-enye aka nkọwa akwụkwọ zuru ezu maka amaala gị nke ọma site na itinye ego na Vanuatu. Ọrụ ọkọlọtọ anyị maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu gụnyere:
Ndị ọka iwu anyị ga-aghọta ihe ị chọrọ maka ịkwaga Vanuatu ma ọ bụ Vanuatu, dabere na aro a ga-atụ
Anyị na-ebu ụzọ rụọ ọrụ kwesịrị ekwesị, iji kwadebe akụkọ tupu ịkwado ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu maka ndị ahịa maka inweta amaala nke Vanuatu yana iji belata ihe egwu nke ịjụ.
Dabere na mkpesa maka ịdị uchu maka Vanuatu, anyị na-akwado mmemme ndị ọzọ maka ọganiihu ka mma.
Maka anyị iji nweta akwụkwọ ikike ịbụ nwa amaala site na ngwa itinye ego maka Vanuatu, anyị ga-achọ nnata akwụkwọ nke onye ahịa na onye ezinaụlọ ya.
Nsụgharị na apostille nke akwụkwọ amaala site na itinye ego maka Vanuatu. Ndị ọka iwu anyị pụrụ iche maka ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu na visa ọla edo ga-enyere aka dejupụta akwụkwọ na akwụkwọ.
Ozugbo akwụkwọ gị na nke ezinụlọ gị maka ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu dị njikere, anyị ga-ejupụta ya na ndị isi dị mkpa nke Vanuatu.
Duration: 2 ọnwa
Ozugbo a kwadoro akwụkwọ anamachọihe gị maka ịbụ nwa amaala site na itinye ego nke Vanuatu, anyị na gị kerịta ozi ọma ma bido ịkwadebe maka nkwado ndị ọzọ.
Anyị anaghị akwado ma ọ bụ nye ụmụ amaala site na ọrụ itinye ego na Vanuatu n'okpuru ndị akpọrọ aha ma ọ bụ azụmaahịa na Vanuatu:
ụmụ amaala site na ọrụ itinye ego maka Vanuatu enyeghị ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-ekesa ogwe aka na ngwa ọgụ sitere na ma ọ bụ na Vanuatu.
ụmụ amaala site na mmemme itinye ego maka Vanuatu enyeghị maka nlezianya nka na Vanuatu ma ọ bụ ozi nzuzo nke mmemme itinye ego na ma ọ bụ site na ma ọ bụ na Vanuatu.
ụmụ amaala site na nyocha ego maka Vanuatu enyeghị maka ihe ọ bụla megidere iwu ma ọ bụ mpụ na Vanuatu.
ụmụ amaala site na nkwado ego nke Vanuatu abụghị maka ndị mmadụ na-akpakọrịta ihe gbasara mkpụrụ ndụ ihe nketa na Vanuatu.
ụmụ amaala site na ọrụ itinye ego maka Vanuatu abụghị maka azụmaahịa na-emetụta ngwa ọgụ dị egwu ma ọ bụ nke egwu ma ọ bụ nke nwere ike mebi emebi na Vanuatu.
ụmụ amaala site na mmemme itinye ego Nkwado maka Vanuatu adịghị maka ndị mmadụ maka Vanuatu na-azụ ahịa, nchekwa na Vanuatu, ma ọ bụ njem nke akụkụ mmadụ.
ụmụ amaala site na itinye ego nke Vanuatu abụghị maka ụlọ ọrụ nkuchi iwu na-akwadoghị.
ụmụ amaala ọrụ mmemme nke Vanuatu abụghị maka òtù nzuzo okpukpe na ọrụ ebere ha na Vanuatu.
ụmụ amaala site na ọrụ itinye ego na Vanuatu enyeghị ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na Vanuatu.
Mụ amaala anyị ndị ọka iwu na Vanuatu anaghị akwado azụmahịa azụmahịa na ngwa ọgwụ ọjọọ na Vanuatu.
“Ọkwa Dị Mkpa : MM Solutions INC na-akpachapụ anya iji wepụta akwụkwọ AML maka ndị ahịa maka Vanuatu na KYC ha mana anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla maka ịjụ ndị isi na Vanuatu maka ịnakwere akwụkwọ maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu.
Ensbụ nwaamaala site na itinye ego na Vanuatu na obodo ndị ọzọ, gbakwunyere ọtụtụ nkwado ndị ọzọ.
Anyị na-enye ụmụ amaala kacha mma site na nkwado ego na Vanuatu maka itinye ego, mbata na ọpụpụ na atụmatụ ụlọ na Vanuatu.
Kwadoro site na amaala mba ụwa site na ahụmịhe itinye ego na ihe iwu chọrọ nke Vanuatu, anyị na-echepụta azịza kacha mma.
Nwa amaala anyị site na ọrụ itinye ego maka Vanuatu na-enye ọnụahịa dị ọnụ ala, yana ọnụego mmeri kachasị mma maka Vanuatu.
Anyị emeela ọtụtụ afọ ahụmịhe maka ụmụ amaala abụọ na Vanuatu na-akwado ndị ahịa na ezinụlọ ha maka Vanuatu.
Ndi nwa amaala nwere amamịghe site na ndi oka iwu itinye ego na Vanuatu na ndi oka iwu maka Vanuatu na enyere ndi ahia aka.
Anyị nwere ndị ọka iwu na ndị ọrụ kachasị mma maka usoro njikwa na ngwa Vanuatu ndị nyefere gị maka ọganiihu gị.
Tupu ụmụ amaala gị maka Vanuatu na mgbe akwadochara ya, onye otu anyị toro eto ga-anọ ebe ahụ maka azụmaahịa ma ọ bụ nkwado onwe onye maka Vanuatu.
Anyị nwere ahụmịhe mba ụwa na ụmụ amaala site na itinye ego gụnyere Vanuatu, na-enyere ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile aka ọrụ kachasị mma.
Ọ bụrụ na, ụmụ amaala gị site na itinye ego na Vanuatu dara, enwere mba 36 ọzọ anyị na-ejere ozi, anyị dị njikere na atụmatụ B.
Gbakọọ ụgwọ maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu
Iji gbakọọ ego maka ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu biko mejupụta nkọwa niile gụnyere ndị ezinụlọ na afọ ha. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa maka Vanuatu, anyị nwere ike ịnye ọrụ ka mma na ọnụ ala. Ngụkọta ego ga, gụnyere, ego maka ụmụ amaala site na mmemme itinye ego na Vanuatu na ebubo ndị ọzọ.
Ụdị visa nke Vanuatu
Usoro ikike ikike maka Vanuatu
Ebe obibi nwa oge na Vanuatu
Ebe obibi na-adịgide adịgide na Vanuatu
Ndị nnọchi anya na ndị nnọchi anya nke Vanuatu
Tụ isi na Vanuatu
Ensbụ obodo site na itinye ego na Vanuatu na Ọrụ Ndị Ọzọ
Anyị edepụtala ọrụ ole na ole anyị na-enye na Vanuatu maka ihe chọrọ ozugbo ma ọ bụ n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkwaga ezinụlọ gị na Vanuatu site na itinye ego, anyị dị ka onye mmekọ gị maka Vanuatu, anyị ga-eweta ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ yana yana mgbe ị ga-achọ na Vanuatu na ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Ewezuga ensmụ amaala site na nyocha itinye ego na Vanuatu, anyị na-enye azụmaahịa, ọrụ IT na ndị ọrụ HR na Vanuatu, nke ị na-enweghị ike ịchọta n'okpuru otu nche anwụ nke ndị ọkachamara ọ bụla ọzọ nyere maka Vanuatu na-eme anyị ụlọ ahịa otu nkwụsị maka Vanuatu na mba 106.
"Anyị etinyela ọtụtụ afọ na mba ụwa na mba 106 iji nyere ezinụlọ, ndị mmadụ n'otu n'otu, na azụmaahịa nke Vanuatu aka imezu ebumnuche ha na ebumnuche ha."
Anyị na-akwado ụzọ onye ahịa anyị gafere Citizenship site na itinye ego maka Vanuatu site na enyemaka nke ndị ọka iwu anyị, ndị ndụmọdụ na njikọta na Vanuatu na mba ụwa.
Lọ ọrụ na Vanuatu
Anyị nwere ike inyere gị aka deba aha ụlọ ọrụ na Vanuatu ma ọ bụ Gburugburu na Mba 106 (Ọnụ ego ịdenye ụlọ ọrụ na Vanuatu dị ọnụ ala karịa anyị.)
Akaụntụ Banki na Vanuatu
Onye ọ bụla na-etinye ego na-akwaga na Vanuatu ga-achọ akaụntụ ụlọ akụ nke onwe na Vanuatu yana ụlọ akụ na ụlọ ọrụ na Vanuatu, anyị nwekwara ike inye aka na akaụntụ akụ na mba ofesi.
Ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na Vanuatu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba izu na Vanuatu, maka azịza ugwo dijitalụ na Vanuatu dị ka ọnụ ụzọ ọdịnala ma ọ bụ fintech ịkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ na Vanuatu ma ọ bụ mkpuchi crypto, ka anyị mara.
Mgbe amaala site na itinye ego na Vanuatu ma oburu na ichoro bido azụmaahịa site na ịzụ azụmaahịa dị na Vanuatu maka mmalite ozugbo na Vanuatu.
Ọrụ ndị ọrụ ebere na Vanuatu
Anyị ụlọ ọrụ ndị ọrụ mmadụ na Vanuatu nwere ike inyere gị aka na mbanye ngwa ngwa. I nwekwara ike ziga ohere na Vanuatu free.
Nọmba ekwentị mebere maka Vanuatu
Sistemụ azụmahịa nke Vanuatu tinyere nọmba mebere maka Vanuatu Mba 102 na 291 Obodo.
Ọrụ Atụmatụ Ego na Vanuatu
Accounting, ịdị uchu na Vanuatu na otutu ihe.
Adreesị Officelọ Ọrụ Virtual na Vanuatu
Mbido azụmahịa na Vanuatu
Mgbe amaala amaala site na itinye ego na Vanuatu, Mbido azụmahịa na Vanuatu.
Anyị na-enye ihe ngwọta IT akpọrọ n'okpuru na Vanuatu
Emebe weebụ na Vanuatu
Mmepe Ecommerce na Vanuatu
Mmepe weebụ na Vanuatu
Mmeghe Blockchain na Vanuatu
Mmepe ngwa na Vanuatu
Mmepe Sọftụwia na Vanuatu
SEO na Vanuatu
Ndị ọka iwu maka amaala site na itinye ego na Vanuatu
Anyị na-enye ụmụ amaala nke iwu site na ntinye ego nke Vanuatu na ihe ịga nke ọma maka ndị ahịa anyị dị ezigbo mkpa, maka Vanuatu, anyị bụ ndị isi, ụlọ ọrụ iwu anyị maka Vanuatu nwere ndị ọrụ mbata na ọpụpụ kachasị na Vanuatu, anyị nwere aha ọma maka ịnye ahụmịhe kachasị mma maka ọrụ Vanuatu na doro anya azịza azịza maka atụmatụ nke ndị Vanuatu na ezinụlọ ha. Citizbụ onye amaala anyị site na ndị otu itinye ego maka Vanuatu na-enye azịza echepụtara maka ọganiihu ndị ahịa.
Ndi ezi n’ulo gi (umuaka, nwunye, ndi nne na nna) tozuru oke inweta ikike ibi na Vanuatu, ma enyere gi ikike ibi na Vanuatu.
Achọrọ ikike ọka iwu maka Vanuatu maka iwu niile gbasara gị site n'aka ndị amaala site na ndị ọka iwu itinye ego na Vanuatu. Ọ bụrụ n’ị nọ na Vanuatu ma ọ bụ na ị chọrọ ịga leta Vanuatu, anyị nwere ike ịnweta ikike ọka iwu gị ebe a.
Anyị anaghị ana ego maka inweta ikike ọka iwu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibido ndebanye aha ụlọ ọrụ maka Vanuatu nke ọma, a ga-enyerịrị ikike onye ọka iwu gị nke ọma iji nọrọ na mpaghara Vanuatu. Dabere na obodo obibi gị, ọ ga-abụrịrị onye dapụrụ ma ọ bụ onye iwu iwu site n'aka ndị nnọchi anya Vanuatu.
Ajuju a na-ajụkarị - Amaala site na itinye ego na Vanuatu
Kedu ihe bụ nkọwapụta obibi site na itinye ego na Vanuatu?
Enwere ike ịkọwa ebe obibi site na itinye ego na Vanuatu, ịnweta obibi nke Vanuatu site na itinye ego na akụ na ụba nke Vanuatu site n'ụzọ dị iche iche dịka, azụmaahịa, ala na ụlọ, agbụ gọọmentị, wdg. Tinye maka ibi site na itinye ego na Vanuatu, ibi site na mmemme itinye ego na Vanuatu. nke ndị ọrụ ntinye ego maka Vanuatu na-akwado site na obibi site na ụlọ obibi anyị kachasị mma site na ndị ọka iwu itinye ego na Vanuatu, ndị ọka iwu na-ahụ maka itinye ego na Vanuatu na ndị ọbịa kachasị mma maka Vanuatu, na-arụ ọrụ na ebe obibi kacha mma site na ndị na-ahụ maka itinye ego na Vanuatu, yana ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbata na ọpụpụ kacha mma. na Vanuatu.
Ebe obibi site na ọrụ itinye ego maka Vanuatu | Ebe obibi site na ndị ọrụ itinye ego na Vanuatu | Ebe obibi site na ndị ọka iwu itinye ego na Vanuatu | Ebe obibi site na ndị ọka iwu itinye ego na Vanuatu | Ebe obibi site na ndị ndụmọdụ itinye ego maka Vanuatu
Kedu ihe bụ nkọwapụta ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu?
Amaala site na itinye ego na Vanuatu, nwere ike ịkọwa dị ka, ịnweta nwa amaala nke Vanuatu site na itinye ego na akụ na ụba nke Vanuatu site n'ụzọ dị iche iche dịka, azụmaahịa, ala na ụlọ, agbụ gọọmentị, wdg na Vanuatu. Mee ka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu, ụmụ amaala site na mmemme itinye ego maka Vanuatu nke ụmụ amaala site na ọrụ ntinye ego maka Vanuatu, site na ụmụ amaala anyị kachasị mma na Vanuatu, ụmụ amaala kachasị mma site na ndị ọka iwu itinye ego na Vanuatu na ụmụ amaala kachasị mma nke Vanuatu, na-arụ ọrụ nke kacha mma ụmụ amaala site na ndị ọrụ itinye ego na Vanuatu, yana ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbata na ọpụpụ kacha mma na Vanuatu.
Ego bara uru maka ndị ọrụ ọpụpụ maka Vanuatu | Ndị ọka iwu na-akwụ ụgwọ maka ọpụpụ na Vanuatu | Ndị ọkàiwu bara uru na ndị ọpụpụ na Vanuatu | Ndị ọkàiwu na-akwụ ụgwọ na mbata na Vanuatu | Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọpụpụ maka ọnụ na Vanuatu | Afflọ ọrụ iwu mbata na ọpụpụ maka Vanuatu
Gịnị bụ nkọwa nke paspọtụ nke abụọ na Vanuatu?
Paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, enwere ike ịkọwa dị ka, ịnweta nwa amaala nke Vanuatu site na itinye ego na akụ na ụba nke Vanuatu site n'ụzọ dị iche iche, ala, azụmaahịa, agbụ gọọmentị, wdg. Tinye maka paspọtụ nke abụọ na Vanuatu, mmemme paspọtụ nke abụọ maka Vanuatu ọrụ paspọtụ nke abụọ maka Vanuatu, site na ndị ọka iwu anyị kacha mma nke abụọ na Vanuatu, ndị ọka iwu kachasị mma nke abụọ na Vanuatu na ndị ọkachamara maka paspọtụ nke abụọ maka Vanuatu, na-arụ ọrụ na ndị nnọchi anya paspọtụ kacha mma na Vanuatu, yana ndị ọrụ na-ahụ maka mbata na ọpụpụ kacha mma na Vanuatu.
Ọrụ paspọtụ nke abụọ maka Vanuatu | Ndị nnọchi anya paspọtụ nke abụọ na Vanuatu | Ndị ọka iwu paspọtụ nke abụọ na Vanuatu | Ndị ọka iwu paspọtụ nke abụọ na Vanuatu | Onye ndụmọdụ maka paspọtụ nke abụọ maka Vanuatu
Kedu ihe nkọwa nke visa ọla edo na Vanuatu?
Enwere ike ịkọwa akwụkwọ ikike ọla edo na Vanuatu, ịnweta ikike nke obibi nke Vanuatu site na itinye ego na akụ na ụba nke Vanuatu site na ụzọ dị iche iche dịka, agbụ gọọmentị, azụmaahịa, ala na ụlọ, wdg. Tinye maka visa ọla edo na Vanuatu, mmemme visa ọlaedo maka Vanuatu. ọrụ visa ọlaedo maka Vanuatu, site n'aka ndị ọka iwu visa ọla edo kacha mma na Vanuatu, ndị ọka iwu visa ọla edo kacha mma na Vanuatu na ndị ndụmọdụ visa ọla edo kacha mma maka Vanuatu, na-arụ ọrụ na ndị ọrụ nlezianya ọla edo kacha mma na Vanuatu, yana ndị ọrụ ndụmọdụ ọpụpụ kacha mma na Vanuatu.
Ọrụ visa visa maka Vanuatu | Ndị nnọchi anya visa ọla edo na Vanuatu | Ndị ọka iwu visa ọla edo na Vanuatu | Ndị ọka iwu visa ọla edo na Vanuatu | Ndị na-ahụ maka visa ịla ama maka Vanuatu
Kedu ihe ntinye ego kacha nta maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu?
Obere ego maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu bụ USD 150,000.
You na-akwado nkwado iwu maka Vanuatu maka ụmụ amaala site na itinye ego?
Ee, onye ọkaiwu anyị na Vanuatu na ndị nnọchi anya anyị na Vanuatu na-enye nkwado maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu.
Ndi Amaala site na itinye ego na Vanuatu dị oke ọnụ?
Ọnụ nke ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu na ụmụ amaala site na ego itinye ego maka Vanuatu bụ maka ndị bara ọgaranya bara ụba, anyị na-ana naanị ụgwọ maka ndụmọdụ maka ụmụ amaala site na Investment na Vanuatu, anyị na-enyekwa ọtụtụ nkwado ndị ọzọ maka ụmụ amaala site na ntinye ego.
Kedu ndị bi na obodo nwere ike itinye akwụkwọ maka ụmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu ma ọ bụ visa itinye ego na Vanuatu?
Mụ amaala site na ọrụ itinye ego maka nke nwere ike iji ụmụ amaala nke mba ọ bụla jiri mana ihe atụ ole na ole bụ Citizmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Asia, Citizmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Africa, ,mụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Europe, ,mụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si South America, Mụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Malaysia, ensmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Bangladesh, Citizmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Indonesia, ensmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Sri Lanka, ensmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si Nepal, Citizmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si India na Citizmụ amaala site na itinye ego na Vanuatu si UAE.
Ọkachamara ọkachamara site na Nduzi Investment nke Vanuatu
Rịọ maka ndụmọdụ maka ụmụ amaala gị site na itinye ego na Vanuatu
Usoro dị mkpa nke ụmụ amaala site na itinye ego maka Vanuatu
Nlegharị anya na njem ụgbọ elu,
Ọrụ Social & Development Urban
Ọrụ Ugbo na Mmiri,
Ọrụ Ego, Azụmaahịa na Mmepụta na Mbata na Ọpụpụ,
, Ozi nke Health
Ntorobịa, Egwuregwu na Omenala,
Ọrụ Ọha na Insurance National
Gọvanọ-General, Office nke Governmentlọ gọọmentị
Link ka Ngalaba Immigrashọn nke Vanuatu , na-ahụ maka ịhazi usoro maka ịgbalite Immigrashọn na Vanuatu